सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न चेम्बर प्रतिवद्ध | Ratopati
सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न चेम्बर प्रतिवद्ध
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeपुस २७, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो ७० औं वर्ष प्रवेश एवं चेम्बर डे को अवसरमा प्रभातफेरी निकालेको छ ।
आइतबार काठमाडौंको जमल, न्युरोड, असन लगायतका बजार क्षेत्रमा चेम्बर अफ कमर्सले प्रभातफेरी निकालेको हो । सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले चेम्बर स्थापना भएदेखिका कामहरुलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता सहित प्रभातफेरी निकालिएको बताए । उनले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणमा सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न चेम्बर प्रतिवद्ध रहेको समेत बताए ।
प्रभातफेरीमा काठमाडौं, ललितपुर लगायतका जिल्लाका चेम्बर आवद्ध व्यसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । ‘व्यापार समृद्धिको आधार’, ‘राष्ट्रिय पूँजी र व्यववसायीहरुको आधार, समृद्धि र विकासको मुख्य पूर्वाधार’ लेखिएका ब्यानरसहित प्रभातफेरी निकालिएको थियो ।
सातामा ४०० ले बढ्यो सुनको मूल्य
वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा सङ्कटमा सहकारी
कतारी रियालको भाउ ३३ रुपैयाँ नजिक, आज अन्य देशको कति ?
महिला लघुवित्तले गर्‍यो लाभांश संशोधन, बढायो बोनस सेयर
प्रदेशका आठवटै जिल्ला उद्योग स्थापनाका लागि उर्वरभूमि : मुख्यमन्त्री राउत
ज्येष्ठ नागरिक कोभिडको टार्गेट बन्दै, यु-टर्नको सङ्केत ?
बाढी–पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११७ पुग्यो, ३४ जनाको अवस्था अझै अज्ञात
बाढी पहिरोबाट सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा ८ ठाउँमा सडक अवरुद्ध
बाढीपीडित भन्छन् : कति दिन विद्यालयमा बस्ने ?
एम्बुलेन्स र मोटरसाइकल ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
मुख्यमन्त्री आचार्यले आज विश्वासको मत लिँदै, एमाले सरकार ढल्ने पक्का